Siya ngokushuba isimo sezepolitiki yeBDP eBotswana – Bayede News
ISINTU sithi, inxeba le ndoda alihlekwa!
Posted on 24 January 2019 31 January 2019 by Bayede-News
ISINTU sithi, inxeba le ndoda alihlekwa! Sekuphele iminyaka iqembu elibusayo eBotswana, iBotswana Democratic Party (BDP), uma iqhathaniswa namanye amaqembu abusayo ikakhulukazi lawo angomakhelwane bayo, ibonwa njengelehlukile.
Lokhu kwehluka kweBDP kwakuvame ukugqanyiswa nxashane amanye amaqembu abusayo emazweni afana neZimbabwe, iNingizimu Afrika, i-Angola, kanye neNamibia, ebhekene nezinxushunxushu zokubanga izikhundla ngaphakathi kwawo okwakudala ukuthi kube khona ukungezwani kubaholi bala maqembu.
Ukwehluka kweBDP kwakudalwa ukuthi, sekwaphela iminyaka ikwazi ukuthi ihlele ngesinwe ukuthi ngubani ozohola iqembu, nokuthi emveni kwakhe ubani ozothatha izintambo zombuso wezwe.
Lokhu kunethezeka kweBDP kwakwenzeka ngesikhathi amanye amaqembu abusayo emazweni abaliwe ebhekene nezingqinamba ngenxa yemibango nokuqhudelana ukuthi ubani okumele angene esikhundleni sokuba uMengameli weqembu.
Lokhu kunethezeka kweBDP kwakuphinde kudalwe ukuthi leli qembu lalizibona lehlukile kwamanye ngoba lalikwazi ukuhlela kahle ukudlulisa izintambo, ngaphandle kombango wezikhundla.
Ukuhleleka kwaleli qembu kwakwenza nezwe uqobo lithathwe ngabaningi njengelinohlonze liphinde libe yisibonelo kwamanye amaqembu abusayo ukuthi kumele azilawule kanjani. Izigameko ezenzeke ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ziletha umbuzo othi kungabe leli qembu, kanye nezwe selibhekene nezingqinamba ezifana nawo wonke amaqembu abusayo yini noma cha?
Lokhu sikusho ngoba ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, abamaphephandaba bashicelele isigameko lapho owayenguMqondisi wezokuphepha eBotswana uMnu u-Isaac Kgosi eboshiwe ngokusolwa kokuthi uyingxenye yalabo abaphokophelele ukubhukuqa umbuso wezwe. Kodwa, okumele kuphawulwe ngukuthi abamaphephandaba bagqamise lokhu ngoba bengalandeli kahle izigameko emazweni ase-Afrika, ngoba uma bebekwenza lokho bekungeke kumangaze ukuthi kungani uKgosi ezithola esebhekene nengalo yomthetho. Sizofingqa ngengqikithi yalesi sehlakalo eBotswana, nokuthi incikene kanjani nalo mlando ovame ukugqanyiswa ngokuthula kuleli lizwe.
IBotswana izoya okhethweni lwedemokhrasi nonyaka. Njengenjwayelo, iqembu elibusayo selaba no‘siko’ lokuthi onguMengameli wezwe ehle esihlalweni ukuze adedele inkundla kulowo iqembu elibona ukuthi kumele abe nguMengameli wezwe emveni kokhetho. Lolu siko lwenzeka phambilini famahlandla amaningi.
Isibonelo, umqambi wendlela uMhlonishwa uSeretse Khama, wakwazi ukushiyela isikhundla uMnu uKetumile Masire (ongasekho). UMasire, wasishiyela uMnu uMogae, yena owasishiyeka uKhama, ngaphandle kwezihibe. Kuwo wonke lawa mahlandla, akuzange kuqubuke ingxabano eqenjini elibusayo eyagcina idale ukuthi kube nezinkomba zokuthi leli qembu, kanye nezwe, kungase babhekana nezigameko zokubanga ubuholi ezifana namazwe angomakhelwane. Nokho, ukwehla kukaKhama nyakenye esikhundleni sobumengameli ukuzange kube nesiqinisekiso sokuthi lowo obebonwa njengozophatha emveni kokhetho, konke kuzomhambela ngokosiko.
Akupholanga maseko ehlile esikhundleni uKhama kwabonakala ukuthi phakathi kwakhe, nalowo osenguMengameli uMosisi, ayithelelani amanzi. Nyakenye, uMengameli uMosisi, kokuningi akhala ngakho kwaba ngukuthi, izinhlelo zikaKhama zokushiya izintambo kuye azihambanga ngokwenjwayelo.
Ngakokulunye uhlangothi, uKhama, wakhononda ngokuthi kukhona okuthize okumele akuthole njengoMengameli wangaphambili, kodwa uHulumeni ophethe ongakwenzi. Le mpikiswano kulaba baholi yenzeka nyakenye, kepha yangasukunyelwa ngoba bambalwa ababheke iBotswana ngeso lokhozi njengoba benza kwamanye amazwe angomakhelwane.
Ukuboshwa kukaMnu uKgosi, kwenzeke emveni kokuba exoshiwe nguMengameli uMosisi esikhundleni abesibambe iminyaka eminingi. Emveni kokuxoshwa kwakhe, imizamo yalowo owayenguMengameli uKhama yokuthi uKgosi abe ngomunye wabasebenzi bakhe yavinjwa nguHulumeni.
Lokhu, kukhombisa ukuthi lukhona udaba ngaphakathi kuBDP oselwenza ukuthi laba baholi bangabi yizithupha ziya ogwayini. Umsuka walokhu kungaboni ngaso linye phakathi kukaKhama noMosisi, ubonakala ulele ezizathwini ezimbili.
Esokuqala, ngukuthi isifiso sikaKhama sokuthi uMosisi aqoke umfowabo ukuba yiPhini Mengameli asifezekanga. Abaziyo bathi, uKhama wayefisa ukuthi umfowabo abe yiPhini Mengameli kuMosisi, kepha yena waqoka omunye.
Okwesibili, yizinjongo ezikhona kwabanye babaholi beqembu elibusayo zokuthi kuqokwe omunye ukuba nguMengameli emveni kokhetho, kunokuba kube nguMosisi. Lezi zinjongo sezidale ukuthi iNgqungquthela yeBDP ezobanjwa ngaphambi kokhetho lukazwelonke, ibe nababili abagaqele lesi sikhundla.
Lokhu, uma kwenzeka, koba yinto engejwayelekile kuleli lizwe naseqenjini elibusayo. UNkk uVenson- Moitoi owayenguNgqongqoshe phambilini wakhiswa esikhundleni ngoba kuthiwa unezinjongo zokuba nguMengameli. Itwetwe kuMosisi ngelokuthi, uKhama useseka uNkk uVenson-Moitoi, kungakho esethathe isinqumo sokulwisana noKhama.
Kusukela ngowezi-1966 mhla iBotswana ithola inkululeko kumaNgisi, iBDP ayikaze yabhekana nezingqinamba eziningi kwezepolitiki. Kunalokho, ibilokhu iqhubekile ngokuthi ibonwe ngabaningi njengeqembu elikwaziyo ukumelana nezingqinamba zombuso.
Namuhla kubukeka sengathi seligaya ngomunye umhlathi. Isiyobanjwa eshone nayo engqungqutheleni yaleli qembu, kodwa okucacayo ngukuthi lezi zigameko ezenzekayo ziyisiqalo sezingunquko ezingejwayelekile kwezepolitiki yaseBotswana.
UMnu Senzo Ngubane, uNgoti ozimele kwezocwaningo lokudala ukubuyisana nokuthula ezwenikazi i-Afrika.
Posted in Ezamazwe Ngamazwe